Ahoana no ahafantarana raha 32 na 64 bits ny solosainako - VidaBytes | LifeBytes
Ahoana no ahafantarana raha 32 na 64 bit ny solosainako
Encarni Arcoya | 30/05/2022 09:27 | Nohavaozina amin'ny 31/05/2022 08:34 | Tutorials
Alao sary an-tsaina hoe nividy programa famolavolana lehibe ianao. Te-hametraka azy amin'ny solosainao ianao ary rehefa manamarina ny fepetra takiana ianao dia mahatsapa fa mametraka processeur 64-bit. 64? Ary ho tototry ny fo ianao. Ahoana no ahafantarana raha 32 na 64 bit ny solosainako? Inona no maha samy hafa azy ireo?
Raha toa ianao ka efa nanontany tena matetika io fanontaniana io nefa mbola tsy fantatrao, Hampianatra anao ny fomba hahazoana izany data izany izahay, na manana Windows, Linux na Mac ianao. Andao hojerentsika?
1 Inona no dikan'ny processeur 32 na 64 bit
2 Ahoana no ahafantarana raha 32 na 64 bit ny solosainako
2.1 Ahoana no ahafantarana raha 32 na 64 bit ny solosainako amin'ny Windows
2.2 Ahoana no ahafantarana raha 32 na 64 bit ny solosainako amin'ny Linux
2.3 32 na 64 bit amin'ny Mac
Inona no dikan'ny processeur 32 na 64 bit
Araky ny fantatrao, Ny iray amin'ireo ampahany manan-danja indrindra amin'ny solosaina dia ny CPU. satria toa ny atidoha no hifehy ny zava-drehetra. Ary ity iray ity dia miasa miaraka amin'ny bits. Saingy afaka manohana 32 na 64. Izany dia efa miankina amin'ny anton-javatra hafa.
Raha vao jerena, tsy misy fahalalana dia azonao atao ny milaza fa ny processeur 64-bit dia ho tsara kokoa noho ny 32-bit. Ary ny marina dia tsy ho diso ianao.
Raha ny marina dia ireto isa ireto dia mifandraika amin'ny fahafahan'ny solosainao manodina fampahalalana bebe kokoa na latsaka. Mba hanomezana hevitra anao, raha 32 bit ny CPU-nao, dia midika izany fa afaka manodina ny sanda mety ho 4.294.967.296 eo ho eo. Raha 64-bit kosa izy dia hanana 18.446.744.073.709.551.616. Ny fahasamihafana, araka ny hitanao, dia avo be ary izany no mahatonga ny maro ho tia solosaina 64-bit noho ny 32-bit.
Amin'ny lafiny iray, rehefa 32-bit ny CPU dia 4 GB RAM ihany no azony ampiasaina. Ary raha 64-bit izany dia azonao atao ny manosika an'io fetra io hatramin'ny 16GB an'ny RAM.
Inona no dikan'ity?
Izay hanana fahafahana bebe kokoa na latsaka hikarakarana vaovao.
Hahazo fampisehoana bebe kokoa na latsaka ianao.
Hihena ny fijalianao raha mijanona ny solosaina satria tsy mahavita mitantana vaovao be dia be.
Tadidio fa misy fiantraikany koa ny taona. Nandritra ny 10-12 taona eo ho eo dia saika ny solosaina rehetra amidy dia manana maritrano 64-bit. Saingy misy ny sasany mbola mampiasa ny 32-bit miaraka amin'ny programa izay tsy manasarotra azy ny manana solosaina tsy dia matanjaka loatra.
Ankoatra an'i Apple, izay nanomboka tamin'ny 64 bits, ny hafa rehetra dia efa nivadika tamin'ny fanolorana solosaina matanjaka sy haingana.
Amin'izao fotoana izao dia manana fototra ianao ary fantatrao ny tiana holazaina amin'ny processeur 32 na 64 bit, fotoana izao hampisehoana anao ny fomba hahazoanao izany data izany amin'ny solosainao.
Noho izany, tokony ho fantatrao fa ny fananana Windows dia tsy mitovy amin'ny fananana Mac na Linux, satria ao amin'ny rafitra fiasana tsirairay ny angon-drakitra dia ho hita amin'ny toerana iray na hafa. Aza manahy anefa fa homenay anao ny fanalahidin'izy rehetra mba tsy ho sarotra aminao ny fitadiavana azy.
Ahoana no ahafantarana raha 32 na 64 bit ny solosainako amin'ny Windows
Andeha isika hanomboka amin'ny Windows izay, hatramin'izao, dia mbola be mpampiasa indrindra ho toy ny rafitra fandidiana. Araka ny fantatrao, misy dikan-teny maromaro izao, manomboka amin'ny Windows 7 ka hatramin'ny Windows 11.
Ny dingana tsy maintsy ataonao mba hahazoana ny angon-drakitra tsara indrindra sy azo antoka indrindra momba ny solosainao sy ny bits misy azy amin'ny processeur dia ireto manaraka ireto:
Sokafy ny Windows File Explorer. Eto amin'ny tsanganana havanana tokony halehanao Ity ekipa ity. Raha vao manondro azy ianao dia tsindrio eo amin'ny ankavanana (tazony eo ambonin'ireo teny ireo ny cursoro) Hisy menio hiseho.
Hit fananana. Hiditra efijery vaovao ianao izao. Tadiavo ny fizarana «processeur» ary any no hahalalanao ny processeur, ny marika ary ny modelyo. Dia asio marika «Karazana karazana» ary eto no hahitanao raha 32 na 64 bit ny solosainao.
Ok izao Mety hitranga fa ny solosainao dia milaza aminao fa 32 bit izany ary raha ny marina dia 64. Izany dia satria ny solosaina 64-bit dia mifanaraka foana amin'ny ordinatera 32-bit, ary indraindray dia diso ny angona naverina tamin'ny dingana teo aloha.
Inona ary no hatao? Fanamarinana indroa. Ho azy, tsy maintsy mijanona amin'ny dingana farany teo aloha isika.
Amin'io efijery atolony antsika io dia tsy maintsy manindry ny «Tetikasa mandroso«. Izany dia hanome anao efijery kely kokoa misy tabilao maromaro.
Ao amin'ny Advanced Options, amin'ny farany, tsindrio «Vfari-piainana manodidina…». Eto dia hanome varavarankely vaovao isika ary tsy maintsy mikaroka «PROCESSOR_ARCHITECTURE".
Ary tonga ny fanalahidy: Raha mametraka anao izany AMD64 dia manana solosaina 64-bit ianao. SAINGY Raha AMD86 na AMDx86 no voalaza, dia 32-bit ny processeur-nao..
Ahoana no ahafantarana raha 32 na 64 bit ny solosainako amin'ny Linux
Raha Linux ny rafitra fiasa ampiasainao dia tsy mety aminao ireo dingana etsy ambony ireo. Saingy ho mora kokoa aminao ny hahita ny angon-drakitra. Ahoana?
1 Dingana: sokafy terminal. Efa fantatrao fa toy ny varavarankely MSDos ity.
2 Dingana: Soraty ny baiko: iscpu ary tsindrio ny enter. Mety hangatahana ny tenimiafinao ianao. omeo azy
Izany dia hanome anao lahatsoratra kely eo amin'ny efijery. Ao amin'ny andalana roa voalohany dia hanome anao ny fampahalalana tadiavinao. Ary toy izany koa no mitranga eto amin'ny Windows. Raha misy soratra hoe "CPU operating modes 32-bit, 64-bit" dia midika izany fa 64-bit ny solosainao. Fa raha milaza hoe "32-bit CPU Operation Modes" dia 32-bit ihany.
32 na 64 bit amin'ny Mac
Farany, manana ny raharaha Mac isika. Ny marina dia amin'io lafiny io dia mora ny mahazo ny angona satria tsy maintsy:
IRao ny tohatrao ary, izay anananao ny kisary Mac apple, pulsar.
ankehitriny, tokony hanondro ny "About This Mac" na "System Information".«. Hanokatra varavarankely misy fampahalalana momba ny solosainao izy io ary ho fantatrao ny anaran'ny processeur anao. Ao amin'ny varavarankely faharoa, ao amin'ny fizarana Hardware, dia ahafahanao mahazo data mitovy. Noho izany dia azonao atao ny milaza raha 32 na 64 bit izany.
Ka raha efa nanontany tena ianao hoe ahoana no hamantarana raha 32 na 64 bit ny ordinaterako, dia efa manana ny valiny ho takatry ny kitikao ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: LifeBytes » Tutorials » Ahoana no ahafantarana raha 32 na 64 bit ny solosainako
Hanova ny mailaka Instagram
Fiaramanidina fiaramanidina: inona izany, inona izany ary ny fomba famelomana sy famonoana azy